Maparamita eUTM MuEmail Anoshanda Sei NeGoogle Analytics Campaign? | Martech Zone
Isu tinoita zvakati wandei zvekutama uye kuita mapurojekiti eemail vanopa masevhisi kune vatengi vedu. Kunyange zvisingawanzo kutaurwa muzvirevo zvebasa, imwe nzira yatinogara tichiendesa ndeyekuona kuti chero email kutaurirana kuri. otomatiki tag neUTM paramita kuitira kuti makambani aone maitiro eemail kushambadzira uye kutaurirana pane yavo yese saiti traffic. Chinhu chakakosha chinowanzo furatirwa… asi hazvifanirwe kudaro.
Chii chinonzi UTM Parameters?
UTM Zvinomiririra Urchin Yekutevera Module. UTM parameters (dzimwe nguva dzinozivikanwa seUTM kodhi) zvimedu zve data mune zita/value pair inogona kuiswa kumagumo eURL kuronda ruzivo nezve vashanyi vanosvika pawebhusaiti yako mukati meGoogle Analytics. Iyo yekutanga kambani uye chikuva cheanalytics yakanzi Urchin, saka zita rakaramba.
Campaign tracking yakatanga kuvakwa kuti itore kushambadza uye kumwe kutumira traffic kubva kumakambani akabhadharwa pamawebhusaiti. Nekufamba kwenguva, zvakadaro, chishandiso chakave chakakosha pakushambadzira email uye kushambadzira midhiya. Muchokwadi, makambani mazhinji zvino anoisa mushandirapamwe yekutsvaga mukati mesaiti yavo kuyera kuita zvemukati uye kufona-ku-chiito zvakare! Isu tinowanzo kurudzira kune vatengi kuti vaise iyo UTM paramita pane yakavanzika yekunyoresa minda, zvakare, kuitira kuti hukama hwevatengi vavo (CRM) ine sosi data yevatsva vanotungamira kana vanobatika.
The UTM parameter vari:
UTM Parameters chikamu chemutsara wemubvunzo wakaiswa kune kero yewebhu.URL) Muenzaniso we URL ine UTM Parameters ndouyu:
Saka, heino mafambiro eiyo URL chaiyo:
Querystring (zvese mushure me?):
Zita/Value Pairi dzinoputsika sezvinotevera
The querystring variables ndeiyi URL Yakakodhwa nekuti nzvimbo hadzishande zvakanaka mune dzimwe nguva. Mune mamwe mazwi, iyo %20 muukoshi inzvimbo. Saka iyo chaiyo data yakatorwa mukati meGoogle Analytics ndeiyi:
Mushandirapamwe Mushandirapamwe wangu
Source: Yangu email service provider
Nguva: Tenga izvozvi
Kana iwe uchigonesa otomatiki yekubatanidza yekutevera mune mazhinji eemail ekushambadzira mapuratifomu, mushandirapamwe uyu kazhinji izita remushandirapamwe raunoshandisa kumisikidza mushandirapamwe, sosi yacho inowanzova email sevhisi, yepakati inoiswa kune email, uye temu uye zvirimo. anowanzo kumisikidzwa padanho rekubatanidza (kana zvachose). Mune mamwe mazwi, iwe haufanirwe kuita chero chinhu kugadzirisa izvi mune email sevhisi chikuva neUTM yekutevera inogoneswa.
UTM Parameters Inoshanda Sei Neemail Kushambadzira?
Ngatiitei nyaya yemushandisi tokurukura kuti izvi zvingashanda sei.
Mushandirapamwe we email unotangwa nekambani yako ine Track Links inogoneswa.
Iyo email sevhisi mupi anoisa otomatiki iyo UTM paramita kune querystring kune yega yega inobuda link mune iyo email.
Iyo email service provider inozogadziridza yega yega chinongedzo chinobuda nekudzvanya tracking link iyo inoendesa kune kwainoenda URL uye querystring ine UTM paramita. Ndokusaka, kana iwe ukaona chinongedzo chiri mukati memuviri weemail inotumirwa… haunyatsoona iyo URL yekuenda.
CHERECHEDZA: Kana iwe wakamboda kuyedza kuona kuti URL inotungamirwa sei, unogona kushandisa URL redirect tester senge. WhereGoes.
Munyoreri anovhura iyo email uye yekutevera pixel inotora iyo email yakavhurika chiitiko. CHERECHEDZA: Vhura zviitiko zvave kutanga kuvharwa nemamwe maemail maapplication.
Munyoreri anodzvanya pane chinongedzo.
Chiitiko chekubatanidza chinotorwa sekudzvanya neanopa email sevhisi, yozoendeswa kune kwainosvika URL ine maUTM paramita akaiswa.
Munyoreri anogara pawebhusaiti yekambani yako uye Google Analytics script inomhanya pane peji inongotora iyo UTM paramita yechikamu chemunyoreri, inotumira yakananga kuGoogle Analytics kuburikidza neiyo dynamic tracking pixel uko data rese rinotumirwa, uye rinochengeta data rakakodzera. mukati meCookie pabrowser yemunyoreri kuitira kudzoka kunotevera.
Iyo data inounganidzwa uye kuchengetwa muGoogle Analytics kuitira kuti igone kutaurwa muChikamu cheMishandirapamwe cheGoogle analytics. Enda kuAcquisition> Mishandirapamwe> Yese Mishandirapamwe kuti uone yega yega mishandirapamwe yako uye utaure nezve mushandirapamwe, kwaunobva, zvepakati, temu, uye zvirimo.
Heino dhayagiramu yekuti maEmail Links ari sei UTM Coded uye Akabatwa muGoogle Analytics
Chii Chandinogonesa MuGoogle Analytics Kutora UTM Paramita?
Nhau dzakanaka, haufanirwe kugonesa chero chinhu muGoogle Analtics kutora UTM Parameters. Inogoneswa chaizvo kana ma tag eGoogle Analytics aiswa panzvimbo yako!
Ini ndinoshuma sei nezve Shanduko uye Chimwe Chiitiko Nekushandisa Campaign Data?
Iyi data inowedzerwa otomatiki kuchikamu, saka chero chimwe chiitiko chiri kuitwa nemunyoreri pawebhusaiti yako mushure mekumhara ipapo neUTM paramita ine hukama. Unogona kuyera shanduko, maitiro, kuyerera kwemushandisi, zvibodzwa, kana chero imwe rondedzero uye kuisefa neemail yako UTM paramita!
Pane Nzira Yekunyatso Kutora Ndiani Anonyoresa PaSiti Yangu?
Zvinogoneka kubatanidza mamwe querystring akasiyana kunze kweUTM paramita kwaunogona kutora unqiue munyoreri ID kuti wobva wasundidzira uye kudhonza yavo yewebhu chiitiko pakati pemasisitimu. Saka… hongu, zvinogoneka asi zvinoda basa rakawanda. Imwe nzira ndeye kuisa mari mukati Google Analytics 360, izvo zvinoita kuti iwe uise yakasarudzika identifier pane wese mushanyi. Kana iwe uchimhanyisa Salesforce, semuenzaniso, unogona kunyorera Salesforce ID nemushandirapamwe wega wega uye wotosundidzira chiitiko ichi kudzokera kuSalesforce!
Kana iwe uchifarira kuita mhinduro senge iyi kana uchida rubatsiro neUTM Tracking mune yako email sevhisi kana uri kutsvaga kubatanidza chiitiko ichocho kudzokera kune imwe system, inzwa wakasununguka kubata femu yangu… Highbridge.
Tags: kambeyinizvemushandirapamwecampaign mediumzita remushandirapamwecampaign sourcenguva yemushandirapamweemail mushandirapamweEmail Marketingemail service providersgoogle analyticsgoogle analytics mushandirapamwe wekuteveragoogle analytics mushandirapamwe wekutevera urlnziratevera email linkstrack linksparamita utmutm yekuteverautm_campaignutm_contentutm_mediumutm_sourceutm_term